Guangdong Qianjin Industrial invests na-ewu nke a 200,000-ton / afọ obosara oyi Rolling mmepụta oru biri na Shizong, Yunnan - China Foshan Hamis Steel
Guangdong Qianjin Industrial invests na-ewu nke a 200,000-ton / afọ obosara Rolling mmepụta oru ngo biri na Shizong, Yunnan
Guangdong Qianjin Industrial invests na-ewu nke a 200,000-ton / afọ obosara Rolling mmepụta oru biri na Shizong, Yunnan
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, Shizong County agbasoro echiche nke "ịgbanye agbụ ahụ, ịgbatị agbụ ahụ, ma mee ka eriri ahụ sie ike", na-adabere na 1.575 nde tọn nke igwe anaghị agba nchara nchara mmepụta ikike bara uru, na-arụsi ọrụ ike ịzụlite ma gbasaa igwe anaghị agba Ngwongwo ulo oru nchara, ma gbalita iwu ulo oru nchara ulo oru nchara, ma gbalita ime Shizong The County Igwe anaghị agba nchara ulo oru Park ka ewuru n'ime Yunnan's first first class steel steel steel in the southwest.
Dị ka atụmatụ ahụ si dị, Shizong County Stainless Steel Industrial Park nwere mpaghara ala a na-eme atụmatụ nke hectare 279.76 na ego zuru ezu nke ijeri yuan 7.81. A na-eme atụmatụ na ka ọ na-erule 2025, ọ ga-enweta ego ire ere nke yuan 62.8, ngụkọta uru nke yuan 1.81, na mkpokọta ụtụ nke yuan 1.26. A na-eme atụmatụ iji 3 gaa afọ 5 iji wuo Shizong County Stainless Steel Industrial Park n'ime ụdị nkwalite nke ụlọ ọrụ niile sitere na ngwaọrụ, na-agbaze, na-ekpo ọkụ ọkụ, na-agagharị miri emi, na ọtụtụ igwe anaghị agba nchara. ụyọkọ ụgbọ elu nke ụgbọ elu igwe anaghị agba nchara.
The asịd ụlọ ọrụ igwe anaghị agba nchara ụlọ ọrụ malitere na Yunnan Tiangao Nickel Industry Co., Ltd., nke dọtara ulo oru mbo ke 2009. The igwe anaghị agba nchara gbazee mmepụta akara e dechara na-arụ ọrụ na August 2012. N'ime oge, otu ụlọ ọrụ na-ezughị okè ulo oru yinye machibido mmepe na uto nke ụlọ ọrụ igwe anaghị agba nchara Shizong.
Iji nye egwuregwu zuru oke na uru dị iche iche nke mbụ 1.575 nde tọn nke igwe anaghị agba nchara mmepụta ikike, Shizong County webatara Qujing Dachang Trading Co., Ltd., Chongqing Cuizhiyuan Enterprise Management Co., Ltd. na Shizong County Fangwei Investment na Development Co., Ltd. site na nkwalite ego. Shizong County Wolaidi Metal Materials Co., Ltd., na ngụkọta ego nke 870 nde yuan, ga-ewu 1.4 nde tọn 1780mm ọkụ na-agbagharị mmepụta akara na 300,000 tọn 1450mm thermal annealing na pickling mmepụta akara. Ihe oru ngo a malitere iwu na May 29, 2018 ma gwuchaa ya na 2019. Emechara oru ngo a ma tinye ya na October 18, 2010. completionmecha ọrụ ahụ ejirila oghere dị na mmepụta nke akwa warara dị na Yunnan. A na - akọ na Volody na - arụpụta ihe ọkụkụ na - ekpo ọkụ ọkụ bụ nke izizi zuru ezu nke eji aka ya wee mepụta igwe eji arụ ọrụ igwe ihe na China. Ọ nakweere teknụzụ dị elu dị ka nnyefe ọkụ na ọkụ ọkụ nke slabs, ọkpụrụkpụ hydraulic, njikwa obosara akụrụngwa na teknụzụ ndị ọzọ dị elu na mmepụta efere n'ụlọ na mba ofesi. Rolling dị iche iche nnukwu igwe anaghị agba nchara ngwaahịa.
Na Shizong County Igwe anaghị agba nchara Industrial Park, Shizong County Wo Laidi Metal Material Co., Ltd. bụ naanị otu n'ime ọtụtụ ụlọ ọrụ dị na mpaghara mpaghara igwe anaghị agba nchara ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọ bụkwa naanị otu njikọ na igwe anaghị agba nchara ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Na 2020, Shizong County Wolaidi Metal Material Co., Ltd. ga - emepụta tọn 680,000 nke eriri igwe dị iche iche, nwere uru nke ijeri yuan 5 na uru nke 170 nde yuan. N'otu oge ahụ, ọ gosipụtara nke ọma Yunnan Jingzhong New Materials Co., Ltd. na-enwe kwa afọ mmepụta nke 200,000 tọn nke warara-obosara oyi Rolling na Guangdong Qianjin Industrial itinye ego na-ewu nke 200,000 tọn obosara-obosara oyi-Rolling mmepụta oru ngo, nakwa dị ka na-akwado ndị na-ewu nke igwe anaghị agba nchara akpacha ajị, electroplating na ndị ọzọ na mmepụta ahịrị. Ulo oru di iche iche nke igwe na-achoghi inye ihe di iche iche nke igwe anaghị agba nchara, ọkpọkọ, wdg. ụlọ ọrụ ígwè.
Na mma nke igwe anaghị agba nchara ụlọ ọrụ yinye, Sichuan Guojinrong Metal Ihe Co., Ltd., Sichuan Pengzhou Zhongxin Metallurgy Co., Ltd., na Chengming New Materials Co., Ltd. malitere iwu nke efere na ọkpọkọ mmepụta oru ngo. Ka ọ dị ugbu a, iwu ụlọ ọrụ nhazi ga-emezu. A na-atụ anya ka emechaa ma tinye ya na June 2021.
Post oge: Apr-10-2021